Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Linux Mint 14 Nadia | Kubva kuLinux
Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Linux Mint 14 Nadia
Nguva imwe neimwe yavari zvimwe ari vanoshandisa zvekuparadzirwa uku waiziva break off de Ubuntu uye tora imwe nzira yakati siyanei. Iyo yazvino vhezheni Iyo inouya nezvimwe zvinhu zvitsva uye mushanduro mbiri: Cinnamon neMATE.
Zvimwe zvekufunga nezvazvo usati watanga gwara ndizvo zvinotevera:
Kusiyana neUbuntu, Mint inouya nekumisikidza nemazhinji emultimedia odhiyo nemavhidhiyo macodec, saka kazhinji kutaura, kuagadziridza hakusi kukosha.
Chimwe chinhu chakakosha chinoiswa nekusarudzika ndiSynaptic, iyo inozivikanwa package package.
Kana iwe uine iyo Ubuntu-yakavakirwa vhezheni, mazhinji zvirongwa uye mapakeji anowirirana kwazvo pakati pezvose zviri zviviri kugovera.
Tichijekesa aya mapoinzi, isu tinoramba tichinyora zvimwe zvinhu zvinoita kuti hupenyu huve nyore mushure mekuisa iyo nyowani vhezheni Nadia.
2 2. Isa magiraidhi emakadhi emifananidzo
3 3. Isa rongedza mutauro
4 4. Customize chitarisiko
5 5. Isa zvinodzivirira mafonti
6 6. Isa zvirongwa zvekutamba
7 7. Isa odhiyo plugins
8 8. Isa Gparted
9 9. Isa zvimwe zvirongwa
10 Bvisa cache
11 Wongorora yedu nyowani system
Zvinogoneka kuti matsva matsva abuda kubva pawakadhirowa iwo mufananidzo, saka unogona kutarisa kana paine zvigadziriso zviripo kubva kune yekuvandudza maneja (Menyu> Kutungamira> Gadziridza Maneja) kana nemirairo inotevera:
sudo apt-tora yekuvandudza && sudo apt-tora kusimudzira
2. Isa magiraidhi emakadhi emifananidzo
MuMenu Zvekufarira> Mamwe madhiraivha isu tinokwanisa kugadzirisa nekuchinja (kana tichida) mutyairi wekadhi yemifananidzo yatinayo.
3. Isa rongedza mutauro
Kunyangwe nekukasira Linux Mint inoisa iyo Spanish mutauro pack (kana chero imwe yatakataridza panguva yekumisikidza) hazviite zvizere. Kuti tidzorere mamiriro ezvinhu aya tinogona kuenda kuMenu> Zvaunofarira> Rutsigiro rwemutauro kana zvakare nekutaipa unotevera kuraira mune inoteedzera:
sudo apt-tora kuisa mutauro-kurongedza-gnome-en mutauro-kurongedza-en mutauro-kurongedza-kde-en libreoffice-l10n-en thunderbird-locale-en thunderbird-locale-en-en thunderbird-locale-en-ar
4. Customize chitarisiko
Kune nzira dzakawanda dzekuzviita, uye vese vakasununguka! In http://gnome-look.org/ isu tine hombe dhatabhesi yemaphephadonga, madingindira, maturusi uye zvimwe zvinhu zvinotibatsira kuti "titarise" desktop yedu. Tinogona zvakare kushandisa matatu anozivikanwa maturusi:
1. Docky, kapfupi bar uye zvinoshandiswa kudesktop yedu. Webhusaiti yepamutemo: http://wiki.go-docky.com/index.php?title=Welcome_to_the_Docky_wiki. Kuisirwa: mune terminal tinonyora: sudo apt-tora kuisa docky
2. AWN, imwe yekufambisa bar, ingangoita mukwikwidzi kune docky! Webhusaiti yepamutemo: https://launchpad.net/awn Kuisirwa: kubva kuProgram maneja.
3. Conky, system yekutarisa inoratidza ruzivo pazvinhu zvakasiyana siyana, senge RAM, kushandiswa kweCUU, system system, nezvimwe. Kubatsira kukuru ndekwekuti kune akawanda "makanda" echishandiso ichi. Webhusaiti yepamutemo: http://conky.sourceforge.net/ Kuisirwa: sudo apt-tora kuisa conky
5. Isa zvinodzivirira mafonti
Kana zvichidikanwa kuti uvaise, isu tinofanirwa kunyora inotevera mirairo mune terminal:
sudo apt-tora kuisa ttf-mscorefonts-simaki
Isu tinogamuchira marezinesi mazwi nekutarisira neTAB uye ENTER
Izvo zvakakosha kuti uzviite kubva kune chinongedzo uye kwete kubva kune chero emanejaja, nekuti isu tisingazokwanise kugamuchira mazwi ekushandisa mavari.
6. Isa zvirongwa zvekutamba
Pamusoro peiri raibhurari hombe yemitambo iyo yakachengetwa, isu tinayo zvakare http://www.playdeb.net/welcome/, rimwe peji iro rinonyanya kuunganidza mitambo yeLinux masisitimu mune .deb mapakeji. Kana isu tichidawo kunakidzwa nemitambo yedu yeWindows, kwete kuora moyo, sezvo tiine dzimwe nzira:
1. waini (http://www.winehq.org/) inotipa isu neyakaenzana dhata yekumhanyisa kwete mitambo chete, asiwo ese marudzi ese akaunganidzwa software yeWindows masystem
2. Playonlinux (http://www.playonlinux.com/en/) imwe sosi inotipa raibhurari inokwanisa kuisa nekushandisa software yakagadzirirwa Windows
3. Lutris (http://lutris.net/) chikuva chemitambo chakagadzirirwa GNU / Linux, sosi huru kunyangwe iri mumatanho ekuvandudza.
4. Winetricks (http://wiki.winehq.org/winetricksinoshanda sechinyorwa chinobatsira kurodha maraibhurari anodikanwa kumhanyisa mitambo yeLinux, senge .NET Zvimiro, DirectX, nezvimwe.
Kune ese aya mapurogiramu, tinogona kubvunza iwo akakodzera emapeji mapeji, kungave mune yeLinux Mint Zvirongwa maneja kana iyo terminal. Saizvozvo, isu tinokurudzira zvikuru kuverenga izvi mini-mudzidzisi iyo inotsanangura maitiro ekuisa uye kugadzirisa yega yega.
7. Isa odhiyo plugins
Dzimwe dzadzo, saGstreamer kana Kutya, zvichatibatsira kuwedzera katarogu yedu yemafomati akatsigirwa; ese ari maviri anowanikwa mune Zvirongwa maneja kana anogona kuiswa uchishandisa rairo sudo apt-tora kuisa. Isu tinotaura zvakare iyo pulseaudio-equalizer software, inokwanisa kutipa iyo Pulse Audio yekumisikidza uye nekuvandudza iwo ruzha mhando; kuimisa isu tinoshandisa mirairo mitatu:
sudo apt-tora kuisa pulseaudio-yakaenzana
8. Isa Gparted
Izvo zvinokwanisika kuti mune kumwe kumisikidza ino chikamu chinoshaikwa seinobatsira sezvazviri kana uchigadzirisa zvikamu zvemadhisiki edu. Kuva nayo mukugovera kwedu kuri nyore sekutaipa sudo apt-tora kuisa gparted kana kubva kuManeja weChirongwa.
9. Isa zvimwe zvirongwa
Chasara ndechekutora software yaunoda pane imwe neimwe yaunoda. Kune nzira dzakawanda dzekuzviita:
1. In the Chirongwa Manager, iyo yatinopinda kubva kuMenu> Dhairekitori, isu tine yakawanda kwazvo nhamba yezvirongwa zvechero basa rinoitika kwatiri. Maneja akarongedzwa nezvikamu, izvo zvinofambisa kutsvaga izvo zvatinoda. Kana chirongwa chatinoda chavepo, ingori nyaya yekumanikidza bhatani rekuisa uye uchinyora Administrator password. Isu tinogona kunyange kugadzira yekuisa mutsara iyo iyo imwechete maneja ichaita zvakateedzana.
2. With the Pasuru maneja kana tichiziva chaizvo mapakeji atinoda kuisa. Hazvikurudzirwi kuisa zvirongwa kubva pakutanga kana tisingazive ese mapakeji atichada.
3. Kuburikidza a terminal (Menyu> Zvishongedzo) uye typing kazhinji sudo apt-tora kuisa + chirongwa chirongwa. Dzimwe nguva isu tinofanirwa kumbobvira tawedzera iro repository nemirairo Sudo apt-tora ppa: + repository zita; kutsvaga chirongwa neconsole tinogona kunyora zvakakodzera kutsvaga.
4. Pane peji http://www.getdeb.net/welcome/ (Hanzvadzi yaPlaydeb) isu zvakare tine yakanaka katarogu yesoftware yakanyorwa mune .deb mapakeji
5. Kubva kuna peji reprojekti repamutemo kana uine mamwe matanho ekumisikidza.
Zvimwe zvinokurudzirwa nesoftware:
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera: Indaneti mabhurawuza
Mozilla Thunderbird: email uye kalendari maneja
Mahara Hofisi, Vhura Hofisi, K-Hofisi: hofisi suites
Comix: comics muverengi
Okular: yakawanda faira muverengi (kusanganisira pdf)
Inkscape: vector mifananidzo yemhariri
Gimp: kugadzira uye kugadzirisa mifananidzo
VLC, Mplayer: inoridza uye vhidhiyo vatambi
Rythmbox, Audacious, Songbird, Amarok - Audio Vatambi
Boxee: nzvimbo yemultimedia
Caliber: e-bhuku manejimendi
Audacity, LMMS: odhiyo ekugadzirisa mapuratifomu
Pidgin, Emesené, Tsitsi: multiprotocol chat chat vatengi
Google Earth: Nyika inozivikanwa yeGoogle inozivikanwa
Kufambisa, Vuze: P2P vatengi
Bluefish: HTML mupepeti
Geany, Eclipse, Emacs, Gambas: nharaunda dzekuvandudza mitauro yakasiyana
Gwibber, Tweetdeck: vatengi vemasocial network
K3B, Brasero: disc rekodhi
Furious ISO Mount: kukwira ISO mifananidzo pane yedu system
Unetbootin: inokutendera iwe "kukwira" masisitimu anoshanda pane pendrive
ManDVD, Devede: DVD Authoring uye Kusika
Bleachbit: bvisa zvisina kufanira mafaera kubva muchirongwa
VirtualBox, Waini, Dosemu, Vmware, Bochs, PearPC, ARPS, Win4Linux: kutevedzera masystem anoshanda uye software
Mitambo kune zviuru nezvese zvido !!
Kuti uone rwakawandisa runyorwa, unogona kushanyira iyo Zvirongwa chikamu yeiyi blog.
Izvo hazvidiwe, asi kana pane imwe nguva isu tichida kuchenesa ndangariro kwemaitiro tinovhura terminal uye tinonyora zvinotevera: su - (kuva mudzi) uyezve echo 3> / proc / sys / vm / drop_caches. Maitiro aya haasi kukuvadza, asi zvichiri kukurudzirwa kuverenga zvimwe zvinongedzo pa internet, semuenzaniso: http://linux-mm.org/Drop_Caches
Wongorora yedu nyowani system
Isu tatova neyakazara yekushandisa system yakagadzirira kushandiswa kwedu kwemazuva ese. Senguva dzose, zvinokurudzirwa kutsvaga mamaneja, sarudzo, kumisikidza uye zvimwe zvishandiso zveiyo system kuti tizvizive neese kunaka kweesisitimu yedu.
Muchidimbu, zorora uye unakirwe nezvakanaka zvemahara software. Dzidza kamwechete zvazvinonzwa sekusununguka kwehutachiona, zvebhuruu skrini, uye zvinorambidzwa zvemarudzi ese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Linux Mint 14 Nadia
Jose Salvador Toral akadaro
Pamusoroi, mungandibatsire here ini ndine linux mint 14 xfce asi dambudziko nderekuti harindipe chero odhiyo uye ndisati ndave ne linux mint 13 xfce uye neayo odhiyo yekurova ndakachinja kumisikidza ndisina gudzazwi uye kana yaipa ini odhiyo chete mune iyoyo nekuti neKwete iyo yese, asi iyi sarudzo yekumisikidza haichauyi uye haindipe chero odhiyo, ndokumbira ubatsire
Pindura kuna Jose Salvador Toral
Monocot Zea Nzira akadaro
Iyi Linux iri kundibhadharira hafu, asi kunyangwe zvakadaro ndoda kuramba ndichipa Linux ... ini handina kukwanisa kuisa runyorwa runyorwa .. (ini ndatoisa chinoshaikwa n, zvakare kubva kune wekufarira maneja) mumwe munhu anogona kupa ini mamwe mazano? Ndatenda
Pindura Monocot Zea Mays
Kurumu Kurono akadaro
Chinyorwa kubiridzira, uye kubiridzira. Chinyorwa pakutanga chakanyorerwa mint 12, uye ichi chaive chinongedzo kune chekutanga gwara. Copypaste inondinetsa chaizvo. Inofanira kunge iri nekuti ini ndiri zvakare munyori ...
Pindura Kurumu Kurono
Milton Hernan Zvakawanda akadaro
Mhoroi, ndingaite sei kuti ndigadzirise iyo mbiri-bhuti skrini neLinuxMint yakaiswa? Ndakaedza kutevera totorial yandakawana pano asi hazvina kundibatsira.
Pindura Milton Hernán Zvimwe
yeizvozvo, isa iyo burg iyo inopa dzakasiyana siyana sarudzo 🙂
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: n-muench / burg
sudo apt-tora kuisa burg burg-yakajairwa burg-madimikira burg-madingindira-akajairwa burg-emu burg-pc
hesi ndine dambudziko
Iyo keyboard haina kunyatsogadziriswa, mashandiro evamwe mavara ari kushaikwa se «q» «a» «z» «# 1» «Esc» «Tab» «Cap Locks» nezvimwe ...
Pindura kuna ak-D
Edza mumwe mutauro wechiSpanish mune yangu chinhu chakafanana chakaitika kwandiri asi ndakaedza imwe ikabuda ichifamba
Ini ndinogara ne ubuntu linux mint green kopi XD
Pindura ku tke
Paolo rugare akadaro
Thanks ndinobatsira muxo…. sezvo ini ndangokurudzirwa kudzima windwos 8 uye kushandisa linux mint14 =)
Pindura Paolo Paz
Gilberto Pizarro. akadaro
Ndatenda, zvakandibatsira zvakanyanya sezvo ini ndiri mutsva kusunungura software; kunyangwe zvaindiyeuchidza nezveangu maMS-DOS mazuva. (vanozoverenga zera rangu hehehe) nharaunda yesoftware yakandiita kuti ndinzwe sechikamu (uye isu tiri) chemhuri hombe.
Pindura Gilberto Pizarro.
Mhoroi, ndine dambudziko, handikwanise kuvhura peji racho http://www.youtube.com Inosvetukira kwandiri senge kana pasina insternet mu firefox browser. Ndine linux mint 14, inogadziridzwa uye nekuisa ma plugins. ndatenda
Izvo zvinogona kunge zvakaitika, nekuti panguva yekusarudza iyo sarudzo, hauna kusiya nzvimbo yemahara (partition), kuti iitsvake, uye woisa yega mairi; iyo
zvirinani kusarudza bhuku rekuparadzanisa sarudzo ...
Pindura kuna joso
Zvinoenderana nekuti unoimhanyisa (seinotakurika), kana kuti iwe watoisa kare; dambudziko iro i
yakapihwa, kudzamara ndachiisa (nechikamu chebhuku), uye pakarepo ndikamhanya iyo
mhedzisiro, mukuita ikoko ini ndakaburitsa mutauro mutauro (Spanish),
yakasarudzwa kare; Chekutanga tarisa zvaunovandudza, muzviitiko zvakawanda
muzviitiko marongero ekutanga anowedzeredzwa uye / kana kumisikidzwa …… ..
JeremiY Pomp akadaro
Ndinoda kuziva kana ndichigona kurodha pasi xfce kana gnome nharaunda sezvo iyi vhezheni ichiuya ne kde, kana ndinofanira kurodha vhezheni inouya ne xfce? Ini ndinoti nei ndisingade KDE
Pindura JeremiY Pompa
Yakagadziriswa iyo n. Imhosho ipi yawakaita?
Ini ndoda rubatsiro ini handikwanise kuisa mutauro mutauro
Ini ndangoisa iyo asi haina kutamba chero mhando yeodhiyo, kana kubva kuhurongwa kana paInternet. mumwe munhu aigona kundibatsira?
Edza kugadzirisa iyo ~ / .config / ubuntuone / syncdaemon.conf faira
Tarisa mutsara: mafaira_sync_enabled = Manyepo
Tsiva na: files_sync_enabled = Chokwadi
Sevha shanduko uye wovhurazve iyo UbuntuOne control panel. Kana izvi zvikasashanda kungoitika, tangazve.
ndine urombo mune in terminal mune mudzi kana mudzi ini ndanga ndisingazive mushe.
Rodrigo gomez akadaro
Mhoro vanhu, ndinoda mumwe munhu kuti andibate ruoko padambudziko rangu ..
Zvinoitika kuti pakuiisa, ndakasarudza sarudzo yekuiisa pamwe chete neWindows 7, zvinofungidzirwa kuti ndinofanira kukwanisa kushandisa yandinoshandisa pandinovhura netbook rangu (EXO mate X352), ikozvino, pakutanga, grub zvinongonditendera kuti ndiite zviviri zvisingakanganwike uye nzira mbiri dzekudzidzira mint (zvakajairika uye kupora) Ndingaite sei nemaoko kuwedzera windows kune grub kuti ndiisarudze? Ndakaona kuti hapana mafaera akadzimwa kubva kune yakadaro sisitimu mushure mekumisikidzwa kweMint.
Pindura Rodrigo Gomez
sudo yekuvandudza-grub2 mune iyo terminal uye imomo inogadzirisazve grub panofanira kuve nemahwindo uye ndizvozvo. linux mint 14
Mhoroi, ini handizive kuti sei menyu kubva padanho repamusoro uye paine kudhirowa kwakanyanya, handikwanise kuisa icon zvakare nekunyora kweMENU. zvakare kana ini ndikadzora hwindo haigare mune yemamiriro bar asi ini ndinoirasa. kana paine anoziva kugadzirisa iyi ndatenda zvikuru
Jairo mejia akadaro
Muinjini yekutsvaga inowanikwa mumenyu iwe yaunoisa Orí ... Ndinoziva kuti haina kunyanya asi iwe unofanirwa kuiisa nezvose uye kutarisa, izvo zvinokupa sarudzo yeSoftware Origins ipapo sarudzo iyo inoti Zvimwe Vanotyairi kana Kuwedzera Dhiraivha.
Iko kune iyo inoisa nekumira uye izvo zvakagadzirwa nemakambani senge nVidia uye AMD, iwe unoisa yekutanga iyo inoti kuyedzwa kana kuyedzwa uye iwe unoti Nyorera Shanduko (ndinofunga xD) kana Nyorera Shanduko uye unomirira kuti itore, Ini ndinongofanira kutangazve uye Unofanira kuona kana zita rekadhi rako ratoonekwa muMagadzirirwo, kana zvisiri ... Pane dambudziko, ini handizive, bvunza mumwe munhu ane ruzivo rwakakura (Noob)
Pindura Jairo Mejia
Ndingaite sei kubvisa zviteshi kuti ndigare 2 chete?
Compa yakandishandira zvakakwana uye ndapedza kusiya yangu Linux Mint 14 uye iri mutserendende uye yakanakisa umbozha kusvika parizvino ndinoifarira kupfuura Ubuntu 12.04, ini ndoda kuona kuti VLC inoshanda sei mune ino OS. Asi kana ukaita izvi, ini ndozviziva, ndinokuvimbisa 🙂
Mazhinji ndinotenda kune vese avo vanotiunza padhuze neLinux
Ainus Solheim akadaro
Iko kune typo mune yekuraira yekuisa iyo mutauro pack.Pane chinoshayikwa n in
laguage-pack-gnome-es, ingave mutauro-pack-gnome-es
Pindura kuna Ainus Solheim
Mukuru mupiro wako !! zvakandishandira zvakanyanya! (Uye)
Ndiri kunetsekana kudhaunirodha
E: Mamwe mafaira index akakundikana kurodha pasi. Iwo akaregeredzwa, kana ekare akamboshandiswa pachinzvimbo
Asi hazviiti kuisa chero zvigadziriso.
Danniel navas akadaro
kana iripo yekuisa mamwe madhiraivha vanoenda kune zvinyorwa zve software uye mune yekupedzisira tebhu ivo vanoonekwa
Pindura Danniel Navas
MuMint 14, muZvinyorwa hapana chikamu chinoti "Mamwe madhiraivha". Pamusoro peizvozvo, sekuBuntu 12.10, iwe unofanirwa kungwarira neiyo AMD Radeon HD yeiyo 2xxx-4xxx nhevedzano, yenyaya yeXorg: http://infografia-libre.blogspot.com.es/2012/12/como-instalar-el-driver-privativo-amd.html
Zvese zvakanaka nemapurogiramu akakurudzirwa. Dambudziko chete randinaro nderekuti nekuda kwechimwe chikonzero UbuntuOne haivhure. Ini ndatoedza nzira churu uye haingovhurike. Kana ndikaimhanya kubva kuchiteshi ichivhura asi inondiratidza "IPC Error" (mufananidzo wakasungirirwa).
Chero zano rekuti ungarigadzirisa sei? Ini ndatoedza kuisa kubva kuzvitoro uye zvakare kubva ppa asi hapana. Ini ndave kuda kudonha hahaha… 🙁 chero mazano?
Marcelo Andres González Díaz akadaro
Ini ndine Mate kwete neCinnamon, asi tarisa pane iyo menyu mu "Administrator" iyo icon yakafanana neye odhiyo kana kadhi rezwi!
Pindura Marcelo Andres González Díaz
Iwe une iro dambudziko neako marekodhi, kumwe kukanganisa mukati mawo, asi kwete pane server pane mafaera, ndakazviita uye zvakashanda! Rangarira kuti kana iwe ukatanga kuisa chirongwa asi nechimwe chikonzero iwe usapedzise kuzviita, une kukanganisa mune zvinyorwa!
Ndine kukanganisa pandinoda kuisa mafonti neterminal, kana ikandibvunza kana ndichida kuzviita kana kwete, zvinonzi Abort!
Chero mazano ekugadzirisa, ndinokutendai zvikuru ini ndichaikoshesa zvikuru
Izvo zvinoitika kana iwe ukasarudza kusaita! Tarisa kuti yakasarudzwa zvakanaka here kwazvinoti hongu!
ita shuwa kuti iwe wateedzera iwo wese kuraira zvakanaka! Zvakaitika kwandiri uye zvakandishandira!
Ini handisi kuwana "Zvimwe Zvidhirairi" muCinnamon, pane chero munhu anoziva kwavari?
Ruva remusango akadaro
Kunyangwe kuwedzera iyo "n" yaive isipo mumurairo wekumhanyisa mutauro pack, ini handina kukwanisa kuzviita .. Ndakawana ichi Chisingagone kuwana http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/t/thunderbird/thunderbird-locale-es-es_17.0+build2-0ubuntu0.12.10.1_all.deb 404 Haiwanikwe [IP: 91.189.92.200 80]
Ini: Handikwanise kuwana mamwe mafaera, pamwe ini ndinofanira kumhanya "apt-tora inogadziridza" kana kuyedza zvakare ne -fix-isipo?
Pindura Kumusango Wemusango
mhoro, ini ndiri mutsva kune izvi ndinoshandisa linux mint 15, ndine dambudziko rinotevera, ini ndinoedza kugadzirisa kuburikidza neiyo terminal kana kuita kurodha pasi asi zvinondikanda iko kukanganisa:
Kuverenga package package ... Error!
W: GPG kukanganisa: http://archive.canonical.com kuburitsa Kuburitswa: Aya mafemu anotevera anga asingashande: BADSIG 40976EAF437D05B5 Ubuntu Archive otomatiki Kusaina Kiyi.
W: GPG kukanganisa: http://archive.ubuntu.com kuburitsa Kuburitswa: Aya mafemu anotevera anga asingashande: BADSIG 40976EAF437D05B5 Ubuntu Archive otomatiki Kusaina Kiyi.
E: Kusangana nechikamu chisina Pasuru: musoro
E: Dambudziko neMergeList /var/lib/apt/lists/archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_raring_restricted_i18n_Translation-en
E: Iyo rondedzero yemapakeji kana chinzvimbo faira harigone kupatsanurwa kana kuvhurwa.
Ndingafarire rubatsiro rwenyu
Mazvita… .. mupiro wakanaka chose.
Ini handikwanise kurodha chero chinhu
mahombekombe matema akadaro
Zvese zvakanaka, asi dambudziko rangu hombe nderekuti ini ndakaisa pane yangu hard drive
linux mint 14 uye ini handina kukwanisa kubatana neinternet.Mungandibatsirewo, ndinokutendai, zvikasadaro ndinofanira kutanga patsva, kutsvaga chimwe chakasiyana. ndatenda.
Pindura kumahombekombe madema
charles menchero akadaro
Sezvo ini ndakakwanisa kuisa linux mint 14 nadia, ini handina kukwanisa kuwana internet, ndatsvaga
nzvimbo dzakasiyana dzekutungamira uye ini handina kumboita rombo rakanaka. Dambudziko rangu rakazvarwa (ndinofunga)
pandakatanga kurodha pasi pasuru, nekuti mune imwe yemahwindo akaonekwa, rimwe rawo
Ini ndakamaka kuti yaive pa internet, asi izvo zvaive zvisina basa, kuenderera, ndakazviita uye pakupedzisira
Ini handina kukwanisa kupinda muinternet, uye handina kana rubatsiro kubva kune chero munhu uye kana chimwe chinhu chikaonekwa ndiko kundivhiringa kupfuura zvandiri. NDINODZIDZA KUTI NDINONYORA IYI KUTI KUBVIRA KUMWE KOMITI YANDINOKUMBIRA BATSIRO KUTANGA KUTANGA KUSHANDA PADZIMAI RANGU ITSVA
KUSHANDISA LINUX MINT 14 NADIA. NDATENDA
Pindura charles menchero
murume ichi chinyorwa kubva makore maviri apfuura xD, kunge chero chinhu chaunogara uine foramu yauinayo http://foro.desdelinux.net/
Linux Mint 14 haichashandi, rutsigiro rwapera muna Chivabvu. Iwe unofanirwa kudzikisa iyo 17.
Siya katsamba nezve dambudziko randiinaro. Zvese zvakanaka kunze kwekuti ini handina internet, handizive zvinoitika
Asi dambudziko rinouya kubva kwauri kana kusava neruzivo, chero chandinoda nemoyo wangu wese kuti unondibatsira nekuti kunyangwe iri dambudziko ndinofarira Linux Mint 14 Nadia ndinofunga kuti tichawirirana kana ndiri paInternet, kusvika zvino ini ndine mutsindo, mapikicha, mavhidhiyo uye ndinogona kuinyora, ini ndinongoda iyo INTERNET. Ndatenda Charles 08/14/14
menchero shawls akadaro
Zvakanaka ivo vakanditumira kurodha pasi kana kurodha pasi Linux Mint 17. Zvakanaka, ndinozvitora sei? Kana ndine chinzvimbo chegumi nemana pane dhisiki rangu uye kana ndikairodha pasi, ndichave nerutsigiro uye ndichave neinternet, asi ndinoda rubatsiro, kwete makomendi.
nzwisisa kuti ndapedza nguva yakati rebei ndichinetseka kuti ndiwane sisitimu yekushandisa mukuda kwangu
Uye ndinofunga kuti nekubatana kushoma kubva kwauri ndinogona kuwana zvandiri kuda. ndatenda, ndakamirira mhinduro Charles 08/14/14
Pindura kuna chaeles menchero
Handizive kana mhinduro kubva kuna mr «masosi« iri iyo chaiyo, asi zvinoita kwandiri kuti hazvisi zvekugutsikana kwangu kwakazara
izvo zvekuti akandiudza kuti linux mint haina basa uye haana kuyedza kundibatsira, nekuti kure neizvi uye neinotonhora inotonhorera toni, haana kumira kutsanangura chero chinhu, kungoenda ku linux 17. Ini ndinofunga izvi
munhu angave nematambudziko uye aisaziva nzira yekupa kukosha kune "mutengi shamwari" uyo akakumbira rubatsiro.
NDOITA SEI? MR LEFEVRE, NDINODZOKA KWANDAKANGA NDIRI KANA NDICHASarudza KUTI NDIBATSIRWE NENYU. NDATENDA
NDINOFANIRA KUPINDA MU INTERNET NDEZVANDINOBVUNZA.
Pindura kuna CHARLES MENCHERO
Pane chero munhu anoziva kuti ndinogona sei kuisa mutyairi weMint weiyo Dell 1133 purinda?
JUANMA MERIDA akadaro
Ndiri kuona mavhidhiyo achinonoka, yangu laptop yakati rebei, ndingaitei ???? Ndatenda kwaziso
Pindura kuna JUANMA MERIDA
Handinzwisise. Chii chaizvo chinoitika kana iwe ukaedza kutamba vhidhiyo?
Wakaedza kushandisa VLC kana Mplayer?
Icho chemidziyo shoma ??? Tipe zvinoitwa nechikwata chako ...
Inoenderera isina mhinduro kubva kune anoyamura mweya iyo inogona kukubatsira iwe
Ini ndoda kuisa yangu Dell 1133 laser multifunction printer pane yangu Linux Mint ...
batsira, batsira ... ndapota
Gadzira Konqi nyowani neKrita
Kujekesa pfungwa: "Desktop nharaunda" uye "Mahwindo mamaneja".